Mas’uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo Xaaskiisa mindi ku dishay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Mas’uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo Xaaskiisa mindi ku dishay
Mas’uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo Xaaskiisa mindi ku dishay
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyihii waaxda Halgan ee Dayniile Cabdiqaadir Fooldibi ayaa Axadda maanta ah lagu dilay xaafadda Raadeerka ee degmada Dayniile.
Marxuum Cabdiqaadir Fooldibi, ayaa waxaa dishay xaaskiisa, kadib markii toorey si gaadmo ah ugu dhufatay.
Guddoomiyaha ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray tooreydii lagu dhuftay.
Xaaskiisa ayaa la sheegay inay u dishay arrimo la xiriira Maseer (Hinaaso), kadib markii ay ku weerartay guriga Xaaskiisa hore oo ay kala tageen oo xilligaasi uu la joogay, si uu u booqdo carruurtiisa.
Ehelada Marxuumka ayaa sheegay haweenayda falka dilka ah gaysatay in gacanta lagu haayo, islamarkaana sharciga la horgeyn doono.
Allaha u naxariisto Cabdiqaadir Fooldibi oo ahaa Guddoomiyihii Waaxda Halgan ee Xaafadda Raadeerka waxaa aabihiis horay u dilay Ururka Al-Shabaab, isagana maanta waxaa dishay xaaskiisa.
Waxaa maalmahan dambe Muqdisho ku soo badanaya lamaanaha isqaba ee falalka dilalka ah isu gaysanaya, waxaana tani ay muujinaysa qatar wayn inay ka jirto dhanka lamaanaha oo arrimo maseer dartood isku dila.